If I Were Dead | သင္ကာဘုန္းျမင့္-Thinker Bhone Myint
← A Turn of Life
Globalization: Trace Back from 14 Century →
ကိုကြည်တစ်ယောက် စိတ်မောလူမောနှင့် အခန်းပြန်ရောက်လာသည်။ မိန်းမတစ်ယောက်ကို မီးဖွားပေးခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။ မီးဖွားပေးရ၊ အလုပ်ခွင်ဒဏ်ရာရသူတွေကို ပြုစုကုသရ၊ တစ်ခါတလေ ထိုင်းရဲက ဖမ်းလို့၊ အချုပ်ထဲမှာ ဒုက္ခရောက်လို့ ဆိုရင်လည်း ကိုကြည်တို့ ပါရသည်။
မီးဖွားပေးသည်ဆို၍ ကိုကြည့်ကို ဆရာဝန်လား ထင်ကြမည်။ ဆေးပညာ မဆိုထားနှင့် သူနာပြုသင်တန်းပင် ကိုကြည် ဟုတ်ဟုတ်ငြားငြား တက်ခဲ့ဖူးတာ မဟုတ်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အလုပ်လာလုပ်ရင်း ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားတွေကို အကူအညီပေးသော အဖွဲ့တစ်ခုမှာ ဝင်လုပ်သည်။ အခြေအနေ၏ လိုအပ်ချက်အရ သူနာပြုသင်တန်း ရက်တိုလေးတွေ ပြေးတက်ရင်း သူနာပြုဆရာ ဖြစ်လာရသည်။ နောက်တော့ လုပ်ရင်းကပဲ အသားကျလာသည်။
ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားတွေဘဝမှာ အဖက်ဖက်က အဖိနှိပ်ခံဘဝဖြစ်သည်။ အလုပ်ရှင်ကနှိပ်စက်၊ ထိုင်းရဲက နှိပ်စက်၊ ဒါတင် မကေသေး၊ အရပ်သားထိုင်း တွေကလည်း အနိုင်ကျင့်ကြသေးသည်။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မပြောနှင့်၊ ရှိသင့်ရှိထိုက်သည့် ဘတ် ခေါ် အလုပ်သမားကဒ်ပင် မရှိတော့ သူတို့ဘဝမှာ ပြုသမျှ ခေါင်းငုံ့ခံရသည့်ဘဝ။ ကလေးမွေးလည်း ဆေးရုံသွားလို့မရ။ ဆေးရုံစရိတ်လည်း တတ်နိုင်သည်မဟုတ်။ အလုပ်ခွင် ခြေပြတ် လက်ပြတ်၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရင်လည်း ကိုကြည်တို့သာ အားကိုးရာ။
ဒီ့ထက်ဆိုးတာကတော့ နာရေးဖြစ်သည်။ ကိုကြည်တို့က လူနာဆောင် သဘော တန်းလျားလေးရှိသည်။ လုံးဝကို ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုလိုသော လူနာများကို ထားရသည်။ HIV ပိုး ကူးစက်နေသူလည်း ပါသည်။ အများအားဖြင့် နာတာရှည် ရောဂါနှင့် သေရက် စောင့်နေကြသော မျှော်လင့်ချက်မဲ့ လူသားများဖြစ်ပါသည်။
တစ်ယောက်ယောက် သေပြီဆိုရင် ကိုကြည်တို့က အပြင် သယ်ထုတ် သွားသည်။ ပြောရလျှင် ဒီအသုဘတွေကို ပို့မည့်ဆွေမျိုးဥာတိလည်း မရှိကြပါ။ သင်္ဂြိုလ်ပေးဖို့ရာလည်း ကိုကြည်တို့ တာဝန်။ ညနေစောင်း ဒါမဟုတ် ညဘက်လောက်မှာ လူနာဆောင်ကနေ အလောင်းကို သယ်ထုတ်သွားပြီး ကိုယ့်ဖာသာ သင့်သလို သင်္ဂြိုလ်ရသည်။ ကိုကြည်နှင့် ကိုပေါတို့က ဒိုင်ခံ လုပ်ရသူများ။ အခေါင်းဝယ်ဖို့ ပိုက်ဆံငွေကြေး မရှိပါ။ ရှိသမျှလူနာအတွက် ဆေးဖို့ဆိုတာတောင် အလျဉ်မီသည် မဟုတ်သေး။ မဖြစ်မနေ ရက်လည်ဆွမ်းသွပ်၊ အမျှဝေတာ ကတော့ ကိုကြည်တို့ လုပ်ပေးပါသည်။ သို့သော် အသုဘ အခေါင်းဖို့တော့ မတတ်နိုင်။
ညမှောင်မှ လူတစ်စုနဲ့ အလောင်းကို သယ်ထုတ်ပြီး ဖျာနဲ့ပတ် မီးသင်္ဂြိုလ် ရသည်။ လူနာဆောင်က လူနာတွေကို ဒါကို မသိစေပါ။ သူတို့ကတော့ အလောင်းကို သယ်ထုတ်သွားတာသာ မြင်သည်။ ဖျာနဲ့ပတ်ပြီး မီးသင်္ဂြိုလ် လိုက်ရတာဆိုတာ သေဖို့စောင့်နေသူတွေကို မသိစေတာ တရားသည်ဟု ကိုကြည်တို့ ထင်ပါသည်။ အခေါင်းဖိုးဆိုတာလည်း မြန်မာ့မျက်စိနဲ့ကြည့်ရင် မနည်းလှ။ ဘတ်လေးထောင်ကနေ ခြောက်ထောင်ဆိုရင် မြန်မာငွေနဲ့ ပြောင်းတွက်ကြည့်၊ တစ်သိန်းခွဲ နှစ်သိန်းကျော်။ ဒီမှာ ရိုးရိုးအလုပ်သမား တစ်ယောက်၏ လုပ်ခတစ်လစာ အသာလေးရှိသည်။ မရွံမရှာနှင့် အနွံတာခံနိုင်သော ကိုကြည်နှင့် တကိုယ်တည်းသမား ကိုပေါတို့က အဓိက လုပ်ပေးကြရသူများ။ သူတို့ အဖွဲ့သားများသာ ဒီအခက်အခဲနှင့် ဝမ်းနည်းဖွယ် မလှပသော နောက်ဆုံးခရီးကို အတွင်းကျိတ် သိထားသူများသာ။
ကိုကြည်ကတော့ စိတ်ထားတတ်ဖို့ ကြိုးစားသည်။ ပူပူနွေးနွေး ဇနီးသည်ကြောင့်လည်း နေသာထိုင်သာရှိပါသည်။ တစ်ကိုယ်တည်းသမား ကိုပေါကတော့ အနိုင်နိုင်ထူထားရသော စာကြည့်တိုက် အစုတ်ကလေးမှ တရားစာအုပ်တွေသာ တွင်တွင်ဖတ်နေတာ တွေ့ရသည်။ဒီနေ့လည်း ဖျာစုတ်နှင့်ပြီးရသည့် အသုဘမှပြန်ခဲ့တော့ ညကိုးနာရီ ရှိနေပါပြီ။ ကိုကြည် ထမင်းတောင် သိပ်မစားနိုင်။ အိပ်ချင်လှသည်။ ခေါင်းချတာနှင့်ကို အိပ်ပျော်သည်။ သန်းခေါင်ရောက်မှ မော်ဒယ်လ်ညံ့ညံ့ မိုဘိုင်းဖုန်းမှ စူးစူးဝါးဝါးမြည်သံကြောင့် ကိုကြည်လန့်နိုးလာသည်။
အင်း…ဘာများဖြစ်ပြန်ပြီလဲဟု ကိုကြည်စိတ်မသက်မသာ တွေးမိသည်။ ဖြစ်ပြီဟေ့ဆို ညရေးညတာ မရှောင် သွားရတာပဲ မဟုတ်လား။ ဖုန်းဆက်သူက ကိုပေါဖြစ်သည်။
“ပြော ကိုပေါ၊ ဘာဖြစ်ပြန်သလဲဗျ၊ ဘာကေ့စ်လဲ”
ကိုပေါက တုံ့ဆိုင်းဆိုင်းပြောသည်။ ဘာမှ မဖြစ်မှန်းသိတော့ ရင်ထဲက အလုံးကြီးကျသွားသော်လည်း ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီး ညကြီးသန်းခေါင် ဖုန်းခေါ်သော ကိုပေါကို ကျွဲမြီးတိုမိသည်။
“လူဆိုတာ ကွေးသောလက် မဆန့်မီ၊ ဆန့်သောလက် မကွေးမီ၊ သေတတ်တယ် မဟုတ်လားကွ”
ခုမှ ကိုကြည် အထွဋ်အထိပ် စိတ်တိုတော့သည်။
“ဟုတ်တာပေါ့ဗျာ။ နက်ဖြန်တောင် ခင်ဗျား မာလကီးယားရင် ယားသွားမှာဗျ”
“နေပါဦး။ ငါပြောစရာ ရှိသေးလို့ပါ၊ ငါအခု အရှင်ဆန္ဒာဓိကရဲ့ တရားစာအုပ် ဖတ်နေတာ”
ကိုကြည် အိပ်ချင်မူးတူးနှင့် စိတ်လည်း ဆိုးလှပြီ။
“ဒါနဲ့ အသုဘ အခေါင်းတစ်လုံး ဘယ်လောက်ရှိမလဲကွ၊ အနည်းဆုံးပေါ့ကွာ။”
ကိုပေါ စိတ်မှ မှန်သေးရဲ့လားဟု ကိုကြည် တွေးမိလိုက်သေးသည်။ အလောင်းတွေမြင်တာများပြီးများ ကြောင်သွားလေသလား။
“အနည်းဆုံးတော့ ဘတ်သုံးထောင်တော့ ရှိမှာပေါ့ဗျ”
“အေး…ငါပိုက်ဆံစုထားတာ နှစ်ထောင်တော့ ရပြီကွ။”
“အဲဒါကွာ…ငါမင်းကို တစ်ခုမှာချင်တာ။ ငါဗြုန်းကနဲ သေရင် တို့တွေ လုပ်နေကျလို ဖျာလိပ်နဲ့ပတ်ပြီးတော့တော့ ငါ့ကိုမသင်္ဂြိုလ်ပါနဲ့ကွာ။ ငါစုထားတာမှာ လိုသလောက်စိုက်ပြီး အခေါင်းလေးနဲ့တော့ လုပ်ပါ”
ကိုကြည်ရင်ထဲမှ ဒေါသများဖြတ်ကနဲပျောက်ပြီး ဝမ်းနည်းမှုများသာ လှိုက်ကနဲ တက်လာလေတော့သည်။
*Blogger Better Tomorrow ၏ ပြောပြချက်တချို့ကို ဇာတ်အိမ်ပြန်ဖွဲ့ပါသည်။
2 responses to “If I Were Dead”
ေတာက္ပဲ ေခါက္ရမလား. ေဗ်ာက္ပဲ ေဖာက္ရမလား မသိျဖစ္သြားတယ္ဗ်ာ။ ဒီစာဖတ္ၿပီး ဆရာခ်စ္စံဝင္းရဲ့ အခ်စ္မိုးေကာင္းကင္ လို႔ ထင္တယ္။ အဲဒီစာအုပ္ကို သြားသတိရတယ္။
ဆိုးတဲ့ ဘဝေတြ အျမန္ဆံုး သာယာလွပႏိုင္ၾကပါေစဗ်ာ။
(ဒါနဲ႔ တစ္ဆက္တည္း ျမန္မာမေလးေတြ လူကုန္ကူးခံရရံုတင္မက တရိစာၦန္ေလာက္ေတာင္ အေရးေပး အဆက္ဆံ မခံရပဲ ထိုင္းငါးဖမ္းစက္ေလွေတြက လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္ၿပီး ပင္လယ္ထဲ ပစ္ခ်ခဲ့တယ္ ဆိုတဲ့ သတင္းေတြ၊ လူမဆန္ေအာင္ ရိုင္းျပေစာ္ကားမႈေတြ ျဖစ္တုန္းက (ဆိုေတာ့. အခုလည္း ျဖစ္ေနတုန္းလို႔ပဲ ထင္ပါတယ္) ၿငိမ္ေနတဲ့ ထိုင္းမီဒီယာေတြက ဟိုတစ္ေလာက သူတို႔ ေက်ာင္းသူ တစ္ေယာက္ ဗလကၠာယ လုပ္ခံရၿပီး လူသတ္မႈ ျဖစ္ေတာ့ ပြက္ပြက္ညံေအာင္ ထေအာ္ၾက တာကို သတိထားမိတယ္။ ျမန္မာ မီဒီယာေတြ ဘာလုပ္ၾကမလဲ စဥ္းစားသင့္တဲ့ထဲမွာ ပါေစလိုပါတယ္။)